Abafundi basayiniswa ifomu yokungakhulelwa besafunda | News24
Abafundi basayiniswa ifomu yokungakhulelwa besafunda
Johannesburg - Isikole esiseMpumalanga siphoqa abafundi abangamantombazane ukuba basayine ifomu ebabophezela ukuthi ngeke baze bakhulelwe besafunda, kanti uma kwenzeka lokho bazoxoshwa esikoleni.
Abafundi abaphakathi kweminyaka engu-14 nengu-18 ubudala base-DM Motsaosele Secondary Kwa-Guqa, eWitbank, banikezwa leli fomu ngoFebhuwari.
Kule fomu abafundi kufanele babhale amagama abo nokuthi benza liphi iklasi, kuyo le fomu kufanele isayinwe wumfundi nomzali bese ibuyiselwa esikoleni.
Uthisha wakulesi sikoleni ongafunanga lidalulwe igama lakhe uthe, uthe isibalo sabafundi abakhulelwayo ngonyaka silinganiselwa kwesabahlanu.
OLUNYE UDABA: Uthishanhloko kwelokukhulelisa ona-13
Abafundi abakhulume nephephandaba iSowetan babe nemibono eyahlukene kodwa bavuma ukuthi ukukhulelwa kwabafundi sekudlangile.
"Uma sikhulelwa sisafunda, sizoxoshwa esikoleni. Ngibona kungalungile lokhu ngoba kwesinye isikhathi iphutha liyenzeka. Manje yini engizoyenza ekhaya uma sengixoshwa esikoleni?" kubuza umfundi kaGrade 10.
Abanye abafundi bathi balisayinile leli fomu balibuyisela esikoleni njengoba bona bezazi ukuthi ngeke baze bakhulelwe besafunda.
Uthishanhloko wesikole u-OJ Ndlozi imibuzo uyidlulisele kuMnyango wezeMfundo eMpumalanga.
Okhulumela uMnyango uJasper Zwane uthe umbiko abawuthole esikoleni ukuthi benza imizamo yokukhuluma namantombazane ngokukhulelwa.
Yize kunjalo, okhulumela uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo u-Elijah Mhlanga uthe isikole sinephutha futhi esikwenzayo akuhambisani nomgomo iNational Policy on the Prevention and Management of Learner Pregnancy.